Baay’e nama gammachiisa qeerroon hinjifanno 4 argate firattis diinattis agarsiise jira – Kichuu
HomePhoto GalleryBaay’e nama gammachiisa qeerroon hinjifanno 4 argate firattis diinattis agarsiise jira
Liyuu police ykn milishaa noonowan gara gararaa funaanamee gara daanga amaarafi tigray jiduti ergame gara naano isaanitti akka deebi an himamaati jira
Dubiin keesa bilsiginaati bahujiru akka himatu erga murtiin araara akka bu’u murtayfameen booda waraani noonnowan isaaniti akka deebi an murteesanii jiran
Murtii haarawa himaama jiru akka jedhuti loli biya keesa akka gara araarati deebi u himamaa jira hundaafu sabab isaan deebi aniif akkuma nudhaqabeti isin biraan geenya
Oduu biyaraa nugahe
Akkuma waada isinii seene oduu biyaa isin dhaqabsiisif kan caraaqa jiru taha Akkuma dhagaysan guyaa haraa magaala finfineeti ireechi kabajamaa oole yoo tahu ireechi arraa kun kan miira namaa hawatuufi oromoon rakoo isaa adunyati ibsateedha.Ireecha araa irrati qeerofi qareen sodaa tokkoon malee dararaafi miidha oromoo irra gahaa jiru addunyaa guututti kan mulidhise yootahu ergamtooni mootumaa bilxiginaa ukaamsuf yoo yaalanilee ifatti muldhisanii jiru bakkeewan garagaraa itti miidha dargagoo yoogaysanilee dhaadanoofi gootumaa garsiisun sirna gabroonfaa diree baasanii jiran
Dhaadanoowan hara dhagaysisan keesa muraasni hidhamtooni siyaasa haanuu hiikaman haqni hacaalu nuuhaabahu fi mootumaan walqixumaa sabaafi sablamoota nuuf haa ijaaramu jachaati turan
Kanaafu hanga mootumaan waliqixuun umata tajaajilu dhufu falmiin itti fufa
INJIFANOON KAN WARA HAQAAF LOLANIDHA
Obboleetti Teenyaa Kan Kalee Poolisonni akka male tuman Maqaan isi Samiira Mahammad Je’amti. Gaafa Namni Somale irra Arihaman Yeroof je’ani Bole Bulbulatti Dinkoonaa ykn Shara keessa kaayaan. Isiifi Namoota buqqa’an Gargaarsa gaha Hin arkanne. Kanaafi Kara irra bahuun Dirqama itti tahe. Kanumaaf kalees Nyaata Hooteela kadhatani Kara irratti Nyaacha turan. Ergasii Ilmo isi Sifan Aanaan Harmaa Obaasaa turte.
Garuu Polisiinni dhufani maaf Kara irratti kadhatta jechuun Akka male Ilmo isi duratti tuman. Akkaata itti tuman Hedduu nama Gaddisiisa. Taateen tun erga waraabamte booda namonnii hedduun Norma jiran. Polisoonni saniis hidhaman. Garuu Kan na Aja’ibe Maallaqa Isaa Gargaaruuf silaa guurame san Essa dhaqee? Namoota akka isii Kan Rakkatan Hedduu jira. Meediyaaleen Namoota Yeroo san Koree Sassabdu Maallaqa barbaadatti Nu dhiheessa. Ammaaf Samiiraafi Ilmo Isii Siifan Gargaruuf Account banamaa jira. Maalo waan dandeessan gargaaraan. Account Hogga arkanne isiniiif maxxansina.
#WALAAYITAA Ummanni Walaayitaa sirna nama nyaataa #Abiyyi_Ahmad Bilxiginnaa irratti qabsoo finiinsaa jira! Daandiin hundi cufaadha. Dhakaa fi…
Qeerroon keenya nagaa eegsisa malee nagaa nama hin dhorku. Qeerroon Dirre dawaa Galatoomaa #DIRREE_DHAWAA Dargaggoonni…
Waan qeerroon Goobbaa irra oolan quba qabduu? Qeerroon Goobbaa yeroo ammaa lafa raasaa jira Qeerroon…